EnaSlot Machine: ịn random generator iji nwaa chioma gi na SuperEnalotto!
Haven't budatubebeghị EnaSlot Machine? Mara na 622.614.630 (ihe karịrị nde 622) nke SuperEnalotto n'ezie enweghị usoro nwere ike ijide!
N'ezie, isonye na sistemụ ndị ahụ maka nsogbu SuperEnalotto ebe enwere ọtụtụ egwuregwu na-eme ka nsogbu ahụ pụta, nke ahụ bụ eziokwu, mana ị gwara m ma ọ bụrụ na ị na-egwu otu ngwakọta site na 622 nde ma ọ bụ 100 na-eme ka agịga nke otu ahụ dị ukwuu. nguzozi nke a na-akpọ chioma.
Ọ bụ ya mere, naanị maka ọchị, abịara m nke a n'oge gara aga jenerato na-enweghị usoro nke dịkwa mma maka ndị enyi si mba ọzọ ma ọ bụrụ na ha nwere ohere ịgba lọtrị ha masịrị anyị SuperEnalotto, gụnyere mmịpụta nke nọmba 6 n'ime 90.
Otu esi eji ya EnaSlot Machine
Na omume Enaoghere Machine bụ mebere oghere igwe na site na 6 nọmba na-egwu iji na-agbalị iji merie na SuperEnalotto.
Enweghị ihe ọzọ ị ga-ekwu, naanị ịmalite mmemme ahụ, pịa eriri na-acha uhie uhie n'aka nri, ma chere maka mmịpụta nke nọmba anyị nwere obi ụtọ, nke a ga-egwu na ụlọ ahịa ịkụ nzọ ma ọ bụ ọbụlagodi na ntanetị.
Ok m dere too much, ezigbo nbudata ma oburu na i nweghi mmeri ka i merie Jackpot mara nma… chetam!
Nbudata Nbudata	Enaslot.zip - 1 MB